Erik Lamela Vana Vechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts
musha South AMERICA FOOTBALL STORies Vanotamba Nhabvu Vanotamba Erik Lamela Vana Vechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; "Coco". Erik Lamela Mwana Wedu Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye OFF-Enda zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva nezvekukwanisa kwake kuuraya asi vashomanana vanoona Erick Lamala's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina humwe hunodikanwa, ngatitangei.
Erik Lamela Vana Vechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwekutanga
Erik Lamela akaberekwa musi we 4th waMarch 1992 muCarapachay, Argentina.
Akazvarwa kuna amai vake, Miriam Lamela uye baba, José Lamela. Akakurira mudunhu reBuenos Aires pamwe nemukoma wake mukuru, Brian uye munun'una Alex.
Baba vake, Jose uyo anotarisa Gabriel Batistuta uye fikiti yake yakakurudzira mwanakomana wake, Erik kutora bhora semabasa. Erik akatanga bhora munguva ye 5.
Mushure mokunge asvika kuRwizi Plate semakore manomwe, Barcelona inonzi yakapa Lamela nemhuri yake £ 100,000 gore, uyewo imba uye basa revabereki vake, kuti vaende kuguta reBarcelona. Ichi chaiva chinhu chakafanana kune icho chakaona Lionel Messi enda kuSpain sechidiki.
Zvinotyisa, vabereki vake vakaramba kupa iyo pasinei nekufadzwa kwevana vavo kuBarcelona. Erik akatotarisa shati yeBarcelona kuti awane woo vabereki vake. Muzvokwadi, vabereki vake vakaita kudana kwekupedzisira nekuramba Bhocelona nekuzvidza kana kuzvidza.
Uyewo mu2004, a Trans World Sports Vashandi vemafirimu vakaenda kuArgentine kunobvunzurudza muLamela ane makore gumi nemana, Lamela uyo akanga atoita hurukuro mushure mekutsvaga 12 zvinangwa zveRwizi Plate's youth in just season. Mushure mokuwana mukurumbira wakawanda sehukuru hwemucheche mudiki, Lamela anozivisa chido chake chekutevera mumakwara e Diego Maradona uye kukunda World Cup yeArgentina. Semwana, aida kutamba PlayStation.
Lamela akapikira kuvimbika kwake kuRwizi Plate, kambani akabatanidza semwana wemakore manomwe.
Izvo chaizvo zvinomanikidzwa kunyange zvakabva kunekuti sezvo semakore emakore ekusazvidzora, kusataura nezvekuora, chikwata chake chakanga chiri pamucheto wekuregererwa kwekutanga munguva yavo yegore re 110 uye Lamela ane makore 19 aiva murume akaremerwa nebasa rekuvaponesa.
Pasinei nekuedza kwakanaka kwaLamela, kambani yakaguma ikundikana kurarama, kurasikirwa nekutamba kunoshamisa kwakakonzera kukwikwidza kubva kune zvikamu zvevatsigiri vavo.
Zvisinei, muti haugoni kuita musango. Akakunda matepi akawanda, Erik Lamela akambozivikanwa semwari muduku webhola. Zvikonzero zvaaiita iye nenzira dzake dzisinganzwisisiki.
Kutadza kwaLamela kwakauya paakave nematambudziko akaoma kubasa rake rehutano neRwizi Plate. Akatamba mitambo ye36 uye akawana 4 zvinangwa chete. Izvi zvakakonzera kudemba kwakawanda pamusoro pe FC FC yake. Akamanikidza nzira yake kuenda kuEurope nokubatana Roma.
Lamela's and Roma's season, zvisinei, yakaguma nechekurwadziwa nekukundwa kune vaRoma vaRazi Lazio muCoppa Italia yekupedzisira, pamwe nekunopera kwechitanhatu muSerie A, zvinoreva kuti Roma haazofambidzana neEurope yebhola kwechipiri chiitiko chinotevera. Izvi zvakakonzera kukanganisa kuenda kune Tottenham. Mari yeLamela yakamuita iye mutengi anodhura zvikuru munhoroondo yekambani, £ 25.8 mamiriyoni, pamwe chete kusvika ku £ 4.2 mamiriyoni mubhadharo yebhonasi.
Erik Lamela Vana Vechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Kana iwe uri mukadzi uye iwe ukaroorana nemukomana, iwe munguva pfupi uchaona wakwegura kupfuura iye, uye iwe haangazokwezva kwauri zvakare. Izvi hazvisizvo zvakaitika kuna Lamela uyo ave ane musikana wake mukuru Sofia Herrero kwemakore mazhinji.
Erik anoda kuchengetedza hupenyu hwake hwepachivande ari oga. Anoshandisa nguva dzake dzose naSofia uyo waaida kwemakore mazhinji asati asvika kuroora naye mu2010.
Vose vanodikanwa vakasarudza kusava nevana kusvika 25th November 2017 apo mwanakomana wavo Tobias Lamela akaberekwa.
Erik Lamela Vana Vechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Zvakanaka, Erik akauya achibva mumhuri yakakura yeArginine mushure mekunge mari yekutsvaga kwebhora yakabhadharwa.
BABA: Baba vaErik Lamela vakanga vakanaka zvikuru mumazuva ake maduku. Lamela kamwe akatumira mufananidzo wehupenyu hwake hudiki nababa vake, pamwe nemutsara unotevera: "Zuva rakanaka kune vose vanababa kunyanya kune rangu ... rakanakisisa
PaIndaneti, vamwe vatevedzeri veLamela vakaratidza kuti mifananidzo yababa vake mumazuva mashoma yakafanana nechendangariro yeArgentan striker Gabriel Batistuta.
Parizvino, pane Twitter, hardcore Tottenham mutsigiri Steve Nash akadzorera retweeted Instagram link uye achishamisika akashamisika kuti baba vaLamela vaiva, David Ginola. Baba vake vane ikozvino vakwegura sezvakaratidzwa mumufananidzo uri pasi apa.
AMAI: Erik Lamela anotora huwandu hwemagariro evanhu kuti afunge kuti amai vake vanofara Zuva raMama mushure mekunge Tottenham's draw with Liverpool.
HANZVADZI KONAMA: Erik Lamela ane hama yakwegura iyo inofamba nezita racho; Brian Lamela. Brian haana kubviswa kunze kwebhola kubva panguva yehuduku hwake.
Pakati pehama dzake, Alex Lamela munin'ina wake wemukomana, inoratidzwa pasi apa kazhinji inonyanya kukosha.
Erik Lamela akamboshamisika usiku huno pamberi peimba yake kutanga Tottenham uye nhau dzokuti munun'una wake muduku akanga atorwa nevapambi vemagetsi muguta rake reBuenos Aires.
Maererano nemishumo muItaly, 18 ane makore ane makore Axel Lamela akatorwa nepfuti uye akatarisirwa kuti adzikinure.
Akabatwa kwemaawa mashomanana vasati vasunungurwa nevanokunda nguva pfupi vachitengesa mari yeAlexander pesos, iyo inofananidzwa kusvika ne £ 50000 iyo yaaiva nayo. Kunyange zvazvo kutarirwa kwevadzidzi vemabhora evanhu vanopara mhosva kune chisingawanzoitika, mapurisa anotenda kuti panguva ino yaive yakangoerekana yakanganisa uye kungokonzerwa nemotokari yemhepo iyo 5500 yemakore aive ari kutyaira.
Hama yaErik Lamela mukuru, Brian Lamela vakati: ... "Vakatiudza kuti titore mari yemudzikinuro uye tive nechokwadi chokuti mapurisa akanga asina kubatanidzwa. Vakauya kumusuwo wedu wekutanga kuti vatore mari. Havana kufukidza zviso zvavo uye makamera ekuchengetedza kumba kwedu akaanyora. Mukoma wangu anyerere. Isu tose tinofunga kuti chaiva chiitiko chisina kuitika - vakangomupamba nemotokari uye hapana chimwe chinhu. "
Zvakare, uyo asina kufanira Alex Lamela zvakare akazodza musoro wake muhombe yekushambi mumharaunda yavo yeArgentina. Ikukuvadza kwaiva kwakakomba kwakaguma nekupora. Kwemwedzi mishomanana, Alex haana kukwanisa kufamba chero chinhu. Zvaitora nguva yakawanda asati awana rimwe sangano zvakare. Akabva atanga kushanda zuva rimwe nerimwe kuti adzokere kuhupenyu huripo. Panguva yemhirizhonga, Lamela akanga aine dambudziko rekunyanya.
Erik Lamela Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts-Upenyu hwehupenyu
Erik Lamela aka 'Coco' ane zvirevo zvinotevera kumunhu hwake.
Erik Lamala's Strengths: Erik anonzwira tsitsi, unyanzvi, akajeka uye ane unyoro mune zvakasikwa.
Utera hwaErik Lamela: Erik anogona kunge achitya uye ane chido chokunzvenga chokwadi.
Chii Erik Lamela achida: Erik Lamela anoda kuva oga. Anodawo kurara, mimhanzi, rudo, mafirimu anoona, kushambira uye zvinyorwa zvemweya.
Chii Erik Lamela asingadi: Vanhu vanoti vanoziva-izvo-zvose, vakadarika kudzoka kuzomubata (semuenzaniso: kuramba FC Barcelona munguva yehuduku hwake) uye pakupedzisira, utsinye hwemarudzi ose.
Erik Lamela anogara achida kubatsira vamwe, pasina tarisiro yekugadzirisa chinhu. Upenyu hwake hunoratidzwa nekunzwira tsitsi uye hunoratidza unyanzvi hwepfungwa.
Erik Lamela Vana Vechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts Rabona
Erik Lamela akambova nechinangwa chinoshamisa mukuda kuratidza kuti nei Tottenham akachengetedza £ 30million pamabasa ake. Haisi imwe kunze kweiyo 20-yard 'rabona'chinangwa cheSpurs chakauya muEuropea League chaanosangana naAsteras Tripolis.
Zvinoshamisika, munhu chete uyo asina kutungamirirwa nebasa rinoshamisa raiva maneja Mauricio Pochettino, uyo asina kuratidza mafungiro sekuda kwekuti vashandi vake vekudzidzisa vanokwira patsoka dzavo.
Mumashoko eErik Lamela kune Telegraph, akati ..."Ndinongosarudza kutaura nezvesangano rekufambira mberi uye kubatana uye izvo zvinokosha zvikuru. Handidi kutaura pamusoro pezvinhu zvakadai se 'rabona'. Pandakanga ndiri mukomana muduku, ndakadzidza kuzviita uye yakaramba yakanamatira. Haisi chimwe chinhu chandakaita. Zvakasikwa. "
Erik Lamela Vana Vechiitiko Nyaya Plus Untold Biography Facts Kukuvadza Nhau
Erik akambove nemwedzi yakaipa ye13 mwedzi. Ino yaiva nguva nguva yemberi uye basa rake rakabvunzwa. Anotsvaga ricky Villa - an Argentine ari pedyo nemutungamiri wechikwata Mauricio Pochettino - akambotaura kuti pane zvaaisakwanisa kutamba zvakare.
Paakabvunzwa kana aitya nezveramangwana rake, Lamela akati: ..."Ehe saizvozvo. Mune nguva dzakaipa nguva dzose iwe unofunga zvakaipa. Asi mhuri yangu yaigara iine ini uye vatsigiri vaida kundipinza. Vanonditorera simba rokushanda zuva rega roga uye kuti ndisamborega. "
Izvi ndizvo zvaakataura paakadzoka ...
"Ndinonzwa zvakanaka kuti ndidzoke pamatambudziko asi ndakanetseka pamugumisiro. Zvechokwadi, ndinogona kuwana zviri nani zvikuru. Mwedzi ye13 yapfuura yakanga yakasviba, yaive nguva yakaipisisa yehupenyu hwangu. Ndaida chaizvo kutamba asi kukuvara kwangu kwakatora nguva yakareba.
"Mutungamiriri uye vashandi vose vakanga vashamisika. Vakanga vaine nguva dzose neni, shure kwangu. Vanhu vaida kuti ndidzoke uye ndakanga ndangotarisa pairi. Mhuri yangu yaigara iine ini, musikana wangu nguva dzose anondisundira kuti ndidzoke. Uye zvechokwadi zvakanga zvakaoma kuva kwenguva refu asi ibhora. "
CHOKWADI KUTI: Tinokutendai nokuverenga Erik Lamela Rehuduku Hwevanhu Nhoroondo uye untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe taura nesu!.
Emi Buendia Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Lautaro Martinez Childhood Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
Juan Foyth Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Roberto Pereyra Utano Hwokudzidza Plus Untold Biography Facts
Manuel Lanzini Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Nguva dzose Banega Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Marcos Rojo Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts
Nicolas Otamendi Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Javier Pastore Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
Angel Di Maria Utano Nhau Plus Untold Biography Facts